''အခုနောက်ပိုင်းမှာ အချစ်သီချင်းတွေ ထက်စာရင် ဘဝကို ခွန်အားရစေမယ့် သီချင်းမျိုးလေးတွေ ပိုဆိ? - Yangon Media Group
”အခုနောက်ပိုင်းမှာ အချစ်သီချင်းတွေ ထက်စာရင် ဘဝကို ခွန်အားရစေမယ့် သီချင်းမျိုးလေးတွေ ပိုဆိ?
ဖေဖော်ဝါရီလမှာ သီချင်းသစ်တစ်ပုဒ် အွန်လိုင်းပေါ် တင်ပေးသွားမယ့် အဆိုတော်အေသင်ချိုဆွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခြင်း…။
မေး- အဆိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေလဲ။
ဖြေ- အဆိုပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှေ့လမှာ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းကတော့ သီချင်းတွေပဲလုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပွဲတွေလည်း ဆိုဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတွေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ သီချင်းအသစ်တွေလည်းဆိုတယ်။ အရင်တုန်းက သီချင်းအဟောင်းတွေရော နောက်ပရိသတ်တောင်း ဆိုတဲ့ သီချင်းတွေလည်း ဆိုဖြစ်ပါတယ်။
မေး- သီချင်းတွေကိုရော အွန်လိုင်းပေါ်တင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ အခွေ ထုတ်ဖို့ရော ရှိမလား။
ဖြေ- အွန်လိုင်းပေါ် သီချင်းတွေတင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်း ပရိသတ် တွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ချင်တာလည်း ပါပါတယ်။ အခွေထုတ်ဖို့ အတွက်ကတော့ သီချင်းတွေ အကုန်ရှိနေပါပြီ။ အခွေထုတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း အရင်ခေတ်ကနဲ့ အခုနဲ့က ကွာခြားမှုတွေကရှိသွားတာကြောင့် အခွေထုတ် ဖို့ကတော့ လိုပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်းတွေကိုတော့ တစ်လတစ်ပုဒ် ပုံမှန် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မေး- အရင်ကလည်း သရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ အခု ရော ပြန်လုပ်ချင်တာမျိုး ရှိမလား။
ဖြေ- အခုလောလောဆယ်တော့ လုပ်ချင်စိတ်မရှိသေးပါဘူး။ အေသင် အနုပညာအလုပ်တွေကို စလုပ်ခဲ့တုန်းကလည်း အဆိုပိုင်းနဲ့ပဲ စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကို မလုပ်ချင်သေး ဘူးဆိုတာကလည်း လုပ်ရင်လည်း စိတ်ပါမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ့် စိတ်က သရုပ်ဆောင်လုပ်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတာပါ။
မေး- အခုနောက်ပိုင်း သီချင်းလေးတွေက အရင်က ဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းတွေနဲ့ ပုံစံမတူတော့ဘူးနော်။
ဖြေ- အခုနောက်ပိုင်းဆိုဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေက အချစ်သီချင်းတွေထက်စာရင် ဘဝကိုခွန်အားရစေမယ့် သီချင်းမျိုးလေးတွေ ပိုဆိုချင်ပါတယ်။ ဒါတွေက လည်း ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရရော၊ နောက် ကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ ဂီတပုံစံလေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်နားထောင်ပြီး ကြိုက်သွားတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တိုင် လည်း ကြိုက်ရမယ်။ နားထောင်မယ့် ပရိသတ်တွေလည်း သေချာနား ထောင်ကြည့်ပြီးရင် ကြိုက်မယ့်သီချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မေး- ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေရော တွေ့ရမလား။
ဖြေ- သီချင်းတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တေးရေး ဆရာကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံကိုပြောပြီး သေချာအပ်တယ်။ ကိုယ်တိုင်သီချင်း ရေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်း သီချင်းရေးတယ်ဆိုတာ အေးဆေးပြီး အားလပ်တဲ့ အချိန်မျိုးဆို ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
မေး- ကိုယ့်ကလေးကိုရော အနုပညာအလုပ် လုပ်စေချင်လား။ သူ့ကိုရော ကြော်ငြာတွေရိုက်ဖို့ ကမ်းလှမ်း တာမျိုးရှိလား။
ဖြေ- အဲဒီလိုရိုက်ဖို့ ပြောတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မရိုက်ဖြစ်သေးပါဘူး။ သူက ငယ်သေးတော့ မပင်ပန်းစေချင်သေးဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ သူ့ကို အနုပညာသမား မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုနောက်က ရိုက်ခတ်တဲ့ ဒဏ်တွေကို သူ့ကို မခံစားစေချင်လို့ပါ။
လာမည့် မတ်လမှာ Netflix မှ ပြသမယ့် Delhi Crime အိန္ဒိယစီးရီး
မိုင်ပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်အထိ ခရီးနှင်ပြီးခဲ့သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး တွဲလက်များ(Wheel Chair) ရထားအဖွဲ့ မြန်?
မန္တလေးမြို့ ထွန်းဦးစာပေနှင့် နဂါးစာပေ တို့တွင် ဆိုင်ရှိ စာအုပ်မှန်သမျှ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း လေ
ကျယ်ဂေါင်နယ်စပ်ဂိတ်၌ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ခံနေသည့် ကန်တော့ဗန်းရွက် မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဥ??